दैनिक २ मिनेट ॐ जप गर्नुहोस्, यी नियमको ख्याल राख्नुहोस् ! - MassiveKhabar
दैनिक २ मिनेट ॐ जप गर्नुहोस्, यी नियमको ख्याल राख्नुहोस् !
ॐ बिना हरेक मन्त्र अपूर्ण छ, हरेक पूजा निष्फल हुन्छ। हिन्दू मान्यता अनुसार यस एक शब्दमा सम्पूर्ण विश्व, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड समाहित छ। कुनै पनि मन्त्रमा यो एक शब्द थप गर्नाले मन्त्रको प्रभाव बढ्छ। हामी कुनै पनि मन्त्र जप गर्दा हामी ॐ शब्द बाहेक सबै शब्दहरूको सही उच्चारणमा ध्यान दिन्छौं। तर के हामीले कहिल्यै सोचेका छौं कि ॐ शब्दको सही उच्चारण के हो? प्रत्येक मन्त्रको महत्त्व बढाउने यो शब्द, के हामी यसलाई सहि उच्चारण गर्छौं?
धर्मशास्त्रका अनुसार नियमित ॐ शब्दको जप गर्दा व्यक्तिले ब्रह्माण्डको शक्ति प्राप्त गर्छ। यो मात्र होईन, उसको जीवनका सबै दुःख र रोगहरू पनि दूर हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् कि यसको जपले मानसिक तनाव कम गर्छ। त्यसैले, जपको नियमहरू जान्नुहोस् ताकि तपाईं यो शब्दको फाइदा लिन सक्नुहोस्…
ॐ केवल एक शब्द नभएर यसले ध्वनिको कार्य पनि गर्छ। यो शब्द जप गर्दा एक विशेष ध्वनिको अद्भाव हुन्छ जसको कारण बिभिन्न फाइदाहरू हुन्छ। त्यसैले ॐ जप गर्दा शान्त ठाउँ छनौट गर्नुहोस्।
धर्मशास्त्रका अनुसार दिनको चौबीस घण्टामध्ये केही घण्टा ईश्वरीय शक्ति चरम शिखरमा हुन्छ। यस समयमा गरिएको जप, पाठ, उपासनाबाट अझ बढि नतिजा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बिहान चाँडै र राती सुत्नु अघि जप गर्नु अझ फलदायी हुन्छ।
ॐ को उच्चारण गर्दा तपाईंको आवाज कत्तिको छिटो र सुस्त छ भन्ने कुराले पनि फाइदा गर्छ। धर्मशास्त्रका अनुसार ॐ शब्द जति गहिरो र ठूलो आवाजमा उच्चारण गरिन्छ, त्यत्ति नै प्रभावकारी हुन्छ।
दैनिक रूपमा यो शब्दको २ मिनेट जप गर्दा मानसिक तनाब कम हुन्छ। साथै शरीरमा रहेका विभिन्न रोगहरुको पनि निदान गर्छ।